Yangon:Believers Church nih’Paletwa pengkulh chung um mi hna’Tangka ceilak an bawm hna. – Onlinenungak
Yangon:Believers Church nih’Paletwa pengkulh chung um mi hna’Tangka ceilak an bawm hna.
Paletwa pengkulh chung um harsatnakatawng mi kan members inchungkhar 183 hna nih Facang tun an i cawk khawh nakding phaisa 6,405,000 MMK kan kuat khawh hna caah kan i lawm i, 𝗣𝗮𝘁𝗵𝗶𝗮𝗻 𝗺𝗶𝗻 𝘀𝘂𝗻𝗴 kan thangthat.
Hi Believers Church for Rakhine & Paletwa riantuannak caah phaisaathawhtu ramchung ramleng nan dihlak cungah Pathian thluachuah um ko seh.
Paletwa ram mission hi kum 1992 aharak i thawk i atu bu 21 kan um.
Pathian zaangfahnak Paletwa ramcung ah um ko seh.
ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝဒေသရှိ စစ်ဘေးဒုက္ခကို ရင်ဆိုင်ခံစားနေကြရသော ယုံကြည်သူများအသင်းတော်ဝင် အိမ်ခြေပေါင်း(၁၈၃)အိမ်အ
တွက်၊ စုစုပေါင်းဆန်(၁၈၃)အိတ်၊ ကာလတန်ဖိုး ခြောက်ဆယ်လေးသိန်း(၆,၄၀၅,၀၀၀)ကျော်ကို ပထမအကြိမ် ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးနိင်ချင်းပေါ် ဝမ်းမြောက်ရပါ သည်။
အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်လှူဒါန်းပေးကြသော တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ BCM အသင်းတော်များ၊ ရပ်နီးရပ်ဝေး၊ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ အလှူရှင်များအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
“Believers Church for Rakhine & Paletwa” အစီအစဉ်၏ နောက်ဆက်တွဲလှူဒါန်းခြင်းအစီအစဥ်များကိုလည်း ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။